रामचन्द्र पौडेलका लागि सुरक्षित र सम्मानीत बाटो... | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
रामचन्द्र पौडेलका लागि सुरक्षित र सम्मानीत बाटो...
२०७८ आश्विन २७, बुधबार १७:५३:००
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका समकालीन नेताहरुमा आगामी महाधिवेशनका लागि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने हो भने रामचन्द्र पौडेलको विकल्पमा अरु कोही उभिनुपर्ने कारण छैन । पौडेल अरुभन्दा विलक्षण भएर होइन । पौडेल सभापति बन्नुपर्ने एक मात्र कारण हो, उनी कांग्रेसका लागि अरुभन्दा कम हानिकारक छन् ।
पौडेलको सादगीपन, वैचारिकतामा विश्वास, निष्कलंक छवि अनि अहिलेसम्म मूल नेतृत्वमा नपुगिसकेको कारण पनि यसपालि उनका नाममा सर्वसम्मति हुनुपर्ने देखिन्छ ।हुनुपर्ने एउटा कुरा हो । यो केवल आदर्श र शुभेच्छाको मात्र कुरा भयो । यथार्थ अर्कै छ ।
रामचन्द्र पौडेल आफ्नै गुटभित्र सर्वसम्मत हुन सकिरहेका छैनन् । केन्द्रमा हुने हरेक नेताले आफूलाई सभापतिका रुपमा देखेका छन् । संगठनमा आफ्नो धरातल के हो भन्ने आकलन गर्ने उनीहरुलाई फुर्सद या जाँगर छैन । आफ्नो व्यक्तित्व कुन तुलोमा जोख्ने भन्ने पनि भेउ पाएका छैनन् तिनले । केवल सभापतिको रहर गरेका छन् ।
कतिपयलाई भने रामचन्द्र केही गरी सभापति भइहाल्लान् र आफू पछि परिएला भनेर औडाहा छ । यसले पनि संस्थापनइतर खेमाबाट सर्वसम्मत एकल दावी हुन सकिरहेको छैन ।जब आफ्नै खेमाबाट पौडेल सर्वसम्मत हुन सक्दैनन्, त्यस अवस्थामा उनले सभापति जित्ने सम्भावना कम हुन्छ । उस्तै परे धेरै उम्मेदवारका बीच उनी प्रतिस्पर्धाको पहिलो चरणबाटै बाहिरिने जोखिम रहन्छ । किनभने, साम, दाम, दण्ड, भेदको नीतिमा पौडेल काबिल हुन सक्दैनन् ।
उनको खेमाबाट सशांक कोइराला, शेखर कोइराला, कल्याण गुरुङ, प्रकाशमान सिंह, रामशरण महतलगायतले आफूलाई सभापतिभन्दा तलको उम्मेदवार कसैले ठानेका छैनन् । यो बहुदावी अहिलेसम्म कायमै छ । सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाउने कसरतले मूर्त आकार पाउन सकेको पनि देखिँदैन ।
यही अवस्था कायम रह्यो भने पौडेलले आफू सुरक्षित र सम्मानीत रहने बाटो खोज्नुपर्छ । आफ्नो खेमाभित्रको सर्वोच्च नेतालाई साथ नदिने, बागी भएर निस्कने र सर्वसम्मत बन्ने प्रयासमा भाँजो हाल्नेहरुको नेता भएर बस्छु भन्नु स्वयं पौडेलकै लागि घातक र मूर्खतापूर्ण सोच हुनेछ ।
त्यसो भए के गर्ने त ? उत्तर सजिलो छ– उनका चिर प्रतिद्वन्द्वी शेरबहादुर देउवासँग समझदारीका लागि हात बढाउने । कतिपयले यस मार्गलाई आत्मघाती र थप मूर्खतापूर्ण पनि भन्न सक्छन् । तर, राजनीतिमा चौका दाउ हान्न सक्नेले मात्र आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न सक्छन् । नभए इतिहासको गर्तमा बिलाएर जान्छन् ।
वयोवृद्ध नेता रामचन्द्र पौडेलका निम्ति गर या मरको अवस्था सामुन्नेमा छ । अर्थात्, सुझबुझपूर्ण निर्णय लिएर राजनीतिमा आफ्नो सम्मानपूर्ण अस्तित्व कायम राख्ने कि इतिहासको गर्तमा बिलाएर जाने ?अझै कांग्रेस राजनीतिमा सम्मानपूर्ण हैसियतमा टिकिरहने हो भने पौडेलले अब बिनाकुनै हिच्किचाहट देउवासँग समझदारीका लागि हात बढाउनैपर्छ । यसो गर्न सके उनकै खेमाभित्रबाट छिर्के दाउ हान्न खोज्नेहरु या त पाखा लाग्नेछन्, नभए चुनावी मैदानमा पराजित हुनेछन् ।
देउवासँग शक्ति साझेदारी र राजनीतिक समझदारी गर्न सकेमा पौडेलको कद घट्ने छैन, झन् बढ्नेछ ।
पार्टीमा प्रतिद्वन्द्विता र कलहको वातावरण मेटिनेछ । पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न अहिले त्याग गर्न सके कुनै बेला गणेशमान सिंहले पाएको सम्मान पौडेलले पाउन सक्नेछन् ।सभापति देउवाले पनि यो तहको त्याग र समझदारीका लागि उचित सम्मान दिन कत्ति पनि कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । देउवाले आफू पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री निरन्तरता हुने भएपछि राष्ट्रपति पदमा पौडेललाई ससम्मान पुर्याउने वाचा गर्नुपर्छ । यो बाटो पौडेल र देउवाको राजनीतिक जीवनका लागि मात्र होइन, निकै संकटपूर्ण घडीमा पुगेको कांग्रेसको सुदीर्घ अस्तित्वका निम्ति पनि निकै अर्थपूर्ण हुनेछ । के यो तहको समझदारीका निम्ति कांग्रेसको यो शीर्षस्थ पंक्ति तयार छ ?
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ५९१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण...
विमानस्थलमा भएका अनियमितता अन्त्य गर्छु :मन्त्री आले